Baxnaanin xidhiidhsan ayaa caawin karta dadka maskaxda dhiigu kaga furmo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Baxnaanin xidhiidhsan ayaa caawin karta dadka maskaxda dhiigu kaga furmo
La daabacay torsdag 29 januari 2015 kl 12.28
Dadka uu maskaxda dhiigu kaga furmo ayaa caafimaadkoodu wanaagsanadaan haddii ay helaan xanaano guri oo xidhiidhsan
Taa bedelkeeda, haddiiba aanay helin caawimada ay u baahan yihiin dadkan ayaa u dhinta cudurkaa. Sidaa waxaa daaha ka fayday baadhitaan cusub oo ay samaysay hey’adda dawlada u qaabilsan dabagalka daawooyinka.
Middan ayaa khusaysa badanaa dadka waaweyn ee uu ku dhaco cudurka faaliga iyo sida ay uga soo rayn karaan, una helin karaan nolol firfircoon xanuunka ka dib. Habkan loo yaqaan xanaanayn xiriirsan waxaa isticmaala qaar ka mid ah isbitaalada waddanka sida uu sheegayso barafasoor Lena Von Koch oo ka mid ah dadka ka dambeeya cilmi baadhistan.
((- Middan maaha mid caadi ka ah Sweden, kooxda bixisa daryeelkan waxay ogaadaan baahida bukaanka inta aanu isbitaalka ka bixin, iyaga oo markaa ka dibna guriga ku sii daryeela. Waxaa jira 13 isbitaal oo leh kooxo noocan ah. Lakiin aniga waxay ila tahay in habkan laga dhigo mid shaqada ka mid ah, waxaa ka faa’idaysan lahaa bukaan badan , kuwo badana way farxad gelin lahayd